डा. सिके राउत संघर्ष र धैर्यता उपरको फिल्म 'डा. सिके राउत:दी प्यासन' आउँदै
बन्दे प्रसादको सम्पादनमा रहेको उक्त चलचित्र बाबु नामका व्यक्तिले निर्माण गरेका छन् ।
२ श्रावण, २०७६ || प्रकाशित ०७:४९:००
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबाट चर्चामा आएका डा. सिके राउत उपर फिल्म आउने भएको छ ।
अलगै मधेश देशको माग गर्दै आएका डा. सिके राउतले झेलको समस्या, संघर्ष र धैर्यता उपर उनको जीवनलाई फिल्माइएको हो । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन (संगठन) मा रहेको बेला नेपाल प्रहरी, सरकारले गरेको बर्बरतालाई समेत उक्त फिल्ममा देखाउनेभ भएको छ । बुधबार काठमान्डौंको राइजिङ मलस्थित क्युज सिनेमा हलमा डा. सिके राउत ः दी प्यासन को टिजर सार्वजनिक गरिएको हो ।
सन्तोष साहले निर्देशन गरेको उक्त फिल्ममा राउतको भुमिका परदेशी साहले निभाएका हुन् । फिल्ममा नवराज शर्माको सहायक निर्देशन र रेवन्तविक्रम थापाको द्धन्द्ध निर्देशन छ । बन्दे प्रसादको सम्पादनमा रहेको उक्त चलचित्र बाबु नामका व्यक्तिले निर्माण गरेका छन् ।
एउटै देशमा मधेशी मूलका नेपालीलाई गर्ने गरेको दोस्रो दर्जाको व्यवहार र मधेशी समुदायसँग गरिने सौतेला व्यवहारलाई समेत फिल्ममा दर्साइएको निर्देशक साहले जनाए । टिजर रिलिजको क्रममा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा डा. सिके राउतले स्वयंम आफ्नो जीवन उपरको फिल्म बारे बयान गरेका थिए । अलगै देशको माग सहित राजनीतिको मुलधारसम्मको यात्रा संघर्षलाई दर्साइएको छ ।
अलगै मधेश देशको माग सहित गरेको संघर्ष र जेली जीवनलाई पनि फिल्ममा समावेश गरिएको हो । घर घेराउ गरी प्रहरीले गरेको व्यवहार, उनको परिवार उपर प्रहरीले गरेको व्यहार र जेलमा गरिने व्यहारलाई समेत फिल्माइएको जनाइएको छ । बुधबार टिजर रिलिज गरिएपनि फिल्म रिजिल कहिले गर्ने भने निधो नभएको जनाइएको छ ।